သက်ကရာဇျ သာသနာ ၂၅၆၁ သၞာံ၊ သက်ကရာဇျဍုါ်ျ ၁၃၇၉ သၞာံ၊ ဂိတုမွက်ေကသဵု ၂ စှကျေ၊ တ်ါ်ဲအင်ါ်ာ။
လိက္ကှိပ် IT ဂမၜိုင်
IDM 6.09 built2(နောက်ဆုံးထွက် version)
10:03 PM ညီနေမင်း 1 comment
nevercry009@gmail.comးပထမကညီလေး..computer မှာ. သီချင်းဒေါင်းလောဒ့် မရှိလို့ ဆိုင်မှာ လုပ်ခိုင်းတာ..ဆိုင်က လူကပြော တယ်...ဆော့ဝဲထဲ့ပေးထားတယ်တဲ့... သူထဲ့ပေးတဲ့...ဆော့ဝဲက ဘယ်လိုမျိုးလဲ ညီလေးလဲမသိဘူး....ဒါပေမဲ့..ညီလေးသိချင်းဒေါင်းရတာတော်တော်လေး လွယ်ကူ တယ်... ညီလေးက ထင်တာကတော့ အဆင်ပြေ တယ်ပေါ့... ၁လကြာတော့...ဒေါင်းလို့မရတော့ဘူး...free download လဲမရတော့ ဘူးအကို...ဒေါင်းလိုက်ရင်...First name .....Last name...G mail...Serial number. တွေပဲတောင်းနေတယ် အကို...ဘယ်လိုပြန်လုပ်ရမလဲ အကို...ဖြစ်နိုင်ရင်..ညီလေးကိုကူညီပါအုံး...အကို..သီချင်းဒေါင်းလော့လုပ်ချင်တာ...မရတော့ဘူးအကို...ကူညီပါအုံး.. ရရင်...ညီလေးကို..kooo.nevercry@gmail.com ကို . .မေး(လ်)ပို့ပေးပါ အကို.... အကိုပြန်ပို့မဲ့မေး(လ်)ကို.. ညီလေးစောင့်နေ ပါတယ်... သီချင်းဒေါင်းချင်လို့ပါ...
ညီလေးရေ အစ်ကို by name နဲ့ ပို့တဲ့ဟာက အရမ်းနည်းပါတယ်. မဖြစ်မနေ ပို့သင့်တဲ့ အကြောင်း အရာဆိုရင်တော့ ပို့ပေးပါတယ်. အခုလိုမျိုးကတော့ ပို့စ်တင်ဖြစ်တာများပါတယ်. ဘာလို့လဲဆိုရင်. တစ်ယောက်တည်းကို မေးလ်ပို့ရတဲ့အချိန်ကို ၀ဘ်ဆိုက်မှာ တင်လိုက်တဲ့အချိန်နဲ့ အစားထိုးလိုက်တာပါ. အားလုံးအတွက် အဆင်ပြေသွားအောင်လို့ပါ. အရင်ကလည်းပဲ လုပ်နည်းကို တင်ပေးထားပါတယ်. အခုလည်း video ဖိုင်နဲ့တော့ မတင်ပေးလိုက်တော့ပါဘူး. microphone ပါမလာလို့ပါ.
"ctrl + alt + delete" ဒါမှမဟုတ် Task Bar ကို right click ထောက်ပြီး start Task manager ကို နှိပ်လိုက်ပါ.
ပြီးရင် process ကို ရွေးပြီးနှိပ်လိုက်ပါ. အဲ့အထဲမှာ IDMan.exe ဆိုတဲ့ ဖိုင်နာမည်ကို နှိပ်ပြီး end process ကိုနှိပ်လိုက်ပါ (or) အရင်တင်ထားတာကို uninstall လုပ်လိုက်လည်း ရပါတယ်.
ပြီးတာနဲ့ အခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ထဲက idman609.exe ဖိုင်ကို double click နှိပ်ပြီး install လုပ်လိုက်ပါ.
အားလုံးပြီးသွားရင်တော့ တင်ပေးထားတဲ့ IDM.v6.xx.release.3-patch နာမည်နဲ့ဖိုင်ကို internet download manager ရဲ့ Location ထဲကို သွားပြီး paste လုပ်လိုက်ပါ.
ပြီးရင် right click ထောက်ပြီး Run as administrator နဲ့ Run လိုက်ပြီး patch ဆိုတာကို နှိပ်လိုက်ပါ. ဒါဆိုရင် အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်.
ဒီပို့စ် ထဲက internet download manager ကို download လုပ်လိုက်ပါ။
ပြီးရင် process ကို ရွေးပြီးနှိပ်လိုက်ပါ. အဲ့အထဲမှာ IDMan.exe ဆိုတဲ့ ဖိုင်နာမည်ကို နှိပ်ပြီး end process ကိုနှိပ်လိုက်ပါ . ပြီးတာနဲ့ Download လုပ်ထားတဲ့ ဖိုင်ကို ဖြည်လိုက်ပြီးအထဲက unregister.reg ဆိုတဲ့ registry ဖိုင်လေးကို Double click နှိပ်ပြီး run ပေးလိုက်ပါ. အဲ့ပို့စ်ထဲက video ထဲကအတိုင်းပဲ လုပ်လိုက်ပါ. patch တော့ မလုပ်ပါနဲ့တော့ ပြီးတာနဲ့ အဲ့ထဲက ညီလေးပြောတဲ့ first name တို့ဘာတို့ကို တစ်ခါတည်း ဖြည့်ပေးထားတဲ့ registry key ဖိုင်ကို မိမိတင်ထားတဲ့ window က 32bit လား 64bit လားဆိုတာကို ကြည့်ပြီးတော့ 32bit ဆိုရင် 32bit အတွက်လုပ်ထားတဲ့ registry ဖိုင်ကို run ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ 64 bit ဆိုရင်တော့ 64bit နဲ့လုပ်ထားတဲ့ registry ဖိုင်ကို run ရမှာဖြစ်ပါတယ်. (သတိ-ပထမဦးဆုံး unregister.reg ဖိုင်ကိုအရင် run ပါ) အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ ညီရဲ့ ပေါ်နေတဲ့ box လေး မပေါ်လာတော့ဘဲနဲ့ register ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်. အဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်.
Download IDM 6.09 built 2
Ifile | Mediafire | Mirrorcreator့http://sawamon.blogspot.com/p/မြန်မာဘာသာ.html
Posted by sawamon at 06:43
သွက်မန် apk နွံပဿိက်မ္ဂး download ဒှဲာဏံညိ။
mon unicode & keyboard
UNICODE MON KEYBOARD
KEY BOARD MAP
နွံပဿိက် fonts mon မ္ဂး ကေတ်ဒှဲာဏံညိ။
မြန်မာပြက္ခဒိန်အကြောင် အပြည်စုံးသိလိုပါက ဒီနေရာမှာ ဝင်ကြည်ပါ။
by nsawamon at Mar 17, 2013
Premiuminfo2012 Here you will get the daily updated Premium Accounts and Cookies of various FileSharing site like Wupload,Hotfile,Uploaded.to,Turbobit.net,Rapidshare,Uploading.
နွံပဿိက်ကႝု Premium account မ္ဂးကေတ် ဒှဲာဏံ ညိ
Fonts mon ဂမၜိုင်
Download Mon keyboad Download Zawgyi font
English-Mon Dictionary [Windows OS]
Zawgyi For Mac
Zawgyi x86 x64
နွံပဿိက်ကႝုလိက်ဒွက်မန်မ္ဂး အာဒှဲာဏံညိ။ http://monsonglyrics.blogspot.com
4 ဒွက်ဝွံ copyshift နူကႝု (http://wwwzawzaw.blogspot.com)မြမေဝ်ဇေတ် မဒ်ှကီုရ။
Select Month May 2012 (24)	April 2012 (38)	March 2012 (74)	February 2012 (55)
About Apple IOS (1)
About Phone (2)
Burning Tool (6)
Folder Portect (3)
Image Tool (17)
Key and Activation (1)
Music Tool (12)
Office Tool (5)
System Tool (14)
Android အတွက် (71)
http://sawamon.blogspot.com/p/လိက်ကှိပ် IT ဂမၜိုင်.့html (15)
IDM 6.09 built2(နောက်ဆုံးထွက် version)10:03 PMည...
Photoshop ကို အခြေခံကနေစပြီး ကျွမ်းကျင်နီးပါးအဆင့်...
ဖုန်းထဲမှာ သုံးဖို့နှစ် ၁၀၀ ပြက္ခဒိန် (For Android)
စက်ရုပ်ရဲ့ ပထမဆုံး နှစ် ၁၀၀ ပြက္ခဒိန်ပါ။ 1901-2016 အထိ။ သင့် ဖုန်းကို မူရင်းအတိုင်း ဘာမှ ပြုပြင်ရန် မလိုပါ။ အင်တာနက်နဲ့ ချိတ်ပြီး သ...
Advanced Mobile Care v3.3 Apk ( latest version )
ဒီကောင်လေးကတော့ All in one လို့တောင်ပြောရမလိုဖြစ်နေပါပြီ။ တစ်ခုတည်းနဲ့ feature အကုန်လုံး ပါဝင်နေပါတယ်။ ပါဝင်တဲ့ feature တွေ...
အဘိဓါန် မန်-အင်္ဂလိပ်-မန် Windows အဘိဓါနျ မနျ-အါ်ျဂလိကျ-မနျ ဝှံ သှကျရါံ်ျကဝျြေ ပ်ဍဲ Online ဒၞဲာဏံ ဂျှကီု၊ သှကျဂှံသုါ်ျစေဲာပ်ဍဲ Mobile Ph...